Ma mma ndị Sudan dị mma n'anya.
Beautyma mma ndi Sudan mara mma n’enweghi ihe n’agha.
Mma ndi Sudan bu nma Black / African n'ebube ya niile.
Wantsnye choro ima mma n’enweghi mmeru-emeru na emeruru emeru obula ga na-aga Sudan. Ọbụla ọnụ ahịa oke bekee adabaghị na ịma mma ndị Sudan.
Kedu ihe kpatara ha ji gbanwee OAU ka ọ bụrụ AU? Emepụtara oftù Na-ahụ Maka Unitydị n'Otu nke Africa (OAU) na 1963 n'okpuru mmụọ nke Eze Ethiopia bụ Hailé Selassie, bụ onye meriri igbochi ụzọ ndị ọbịa ahụ.
Ọkt29 04: 44